मशरूम क्रीम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
Cremas37 मिनेट4 व्यक्ति
मैले यो क्रीम मशरूम को एक ट्रे संग कि म घरमा थिए र मँ यो साँच्चै मन पर्यो कोसिस गरें। मैले हल्का क्रीम क्रीम थपेर नुस्खा को लागी एक अधिक व्यक्तिगत स्पर्श दिए र यो हाम्रो को एक नियमित पकवान बन्यो बेलुकाको खाना यो एक आहार को लागी एक आदर्श "प्रकाश" नुस्खा हो।
यो नुस्खा बराबर बनाउन सकिन्छ च्याउ संग। स्वाद अलि फरक हुन्छ तर कुनै पनी मा यो धेरै स्वादिष्ट छ र मेरी छोरीहरु उनीहरु दुबैलाई खुसी खाए। यो तयार गर्न को लागी सरल छ र छ तरकारी खाने अर्को तरिका।
यो क्रीम एक नुस्खा हो कि मलाई भयो मेरो साथी ईवा। हामी साथी हौं जब देखि हाम्रा केटीहरु हामी संग जोडिए जब हामी मात्र एक महिना को उमेर मा थियौं, उनीहरुको शिशु मालिश कोर्स र जीवन को संयोग मा, हामी एकै समय मा कम वा कम दोस्रो केटी थियो र यदि यो पर्याप्त थिएन, हाम्रा छोरीहरु छन्। एउटै नाम !!
त्यसैले आज म चाहन्छु उहाँलाई यो नुस्खा समर्पित गर्नुहोस्, सधैंको लागी उसले मलाई यो तनावपूर्ण जीवन मा एक हात उधारो कि म नेतृत्व। धन्यबाद सुन्दरी!
1 च्याउ क्रीम
तपाईं यो च्याउ मशरूमको साथ पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
खाना पकाउने समय: 37M
कुल समय: 37M
G०० ग्राम मशरूम वा शैम्पिगनहरू
१ तरकारी सब्जी घन
हामीले गिलासमा प्याज, लीक्स, लसुन र मशरूम राख्यौं। हामी बिग्रियो Seconds सेकेन्डको गति।।
हामी spatula को मद्दतले भित्ताहरु को अवशेष तल। हामी तेल र कार्यक्रम जोड्छौं Minutes मिनेट, º०º मा, गति १।
पानी, बाउलोन घन र नूनको १/२ चम्मच जोड्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
पहिलो पाँच मिनेट पछि, हामी कचौरा हटाउँछौं र टोकरी राख्छौं।
समाप्त भएपछि हामी लाइट क्रीम थप्छौं, सजावट र कार्यक्रमको लागि केहि चम्मच राख्दछौं १ मिनेट, ººº, गति २।
हामी गिलास को तापमान कम र को लागी पीस २ मिनेट प्रगतिशील गति -2-१०.
हामी रिजर्भ गरिएको क्रीमको थोपाको साथ हामी सेवा दिन्छौं र सजाउँदछौं।
थप जानकारी - च्याउ सूप को क्रीम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » च्याउ क्रीम
घरको भोजनको लागि यी प्रकाश बत्तीहरू कति राम्रो हुन्छन्।
मलाई थाहा छ आज रातीको खानाको लागि के हो। धन्यवाद।
आशा पेरेज भन्यो
मैले च्याउ जलाउन कोसिस गरेको छैन, तर यो धेरै राम्रो छ, कि यो हल्का हल्का छ, त्यसैले मैले आधा दुध र आधा क्रीम राखें।
Esperanza Pérez लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई क्रीम मन पर्छ!
निश्चितको लागि स्वादिष्ट!
तर क्रीम बिना, यो उस्तै हुनेछ?
म यसलाई जोड्न चाहन्न, सत्य, तर यो सानो भए पनि, यो सधैं क्रीम हुन्छ, र म अरू चीज र क्रीम पनि तयार गर्छु, म मिठो र क्रीम तयार गर्दछु। AAAAHHH कोलेस्ट्रॉल लक्ष्यहरू !! LOL ...
केही प्रकाश चिजहरू जोड्नुहोस् र यो स्वादिष्ट पनि हुन सक्छ।
कति धनी !!! के तपाईं चीजलाई बढी प्रकाशको लागि चीजको रूपमा क्रीम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ??? म तिनीहरूलाई अन्य क्रिममा प्रयोग गर्दछु त्यसैले क्रीमको सट्टामा यो एउटामा ...
अवश्य पनि लौरा, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् जुन राम्रो देखिन्छ।
तपाई कहिले लीकहरू थप्नुहुन्छ? म प्याजको साथ अनुमान लगाउँछु वा यो अर्को चीजको सट्टामा एउटा चीज हो? धन्यबाद
प्याजको साथमा रोसियो थपियो। टिप्पणीका लागि धन्यबाद, यसले मलाई पार गरिसकेको थियो।
पाकुस, अल्छी ब्लग भन्यो
मलाई यो कसरी मनपर्दछ। मैले भर्खरै यसलाई डायरेक्टोर अल पलादारमा प्रकाशित गरें, यो एक नुस्खा हो जुन मलाई धेरै, प्रकाश र सँधै स्वादिष्ट लाग्दछ। चुम्बनहरू
पाकुसलाई जवाफ दिनुहोस्, अल्छी ब्लग
सत्य यो हो कि यो धेरै धनी छ। मलाई थाहा थिएन, जब सम्म यस साथीले मलाई यो दिईएन र अब म प्राय: तयारी गर्दछु। चुम्बन
जुआन मैन्युएल टोरहरू देख्छन् भन्यो
नमस्कार, हालसालै मेरी श्रीमती र मैले दोस्रो हात टीएम २१ किन्नु भयो, मैले दर्ता गरेको छु र तपाईले मलाई नियमित रूपमा मेरो ईमेलमा व्यंजनहरू पठाउनुहुन्छ। म जान्न चाहन्छु कि ती टीएम २१ वा टीएम for 21 का लागि बनेका छन्। र यदि त्यहाँ समय, तापक्रम वा गतिमा केही फरक छ भने। अग्रिम धन्यवाद
JUAN MANUEL REYES TORRES लाई जवाफ दिनुहोस्
Carmen revilla भन्यो
यस गर्मीमा हामीले टिएम -१ bought खरीद गर्‍यौं, हामीले यसलाई छुट्टीमा लियौं र हामीसँग राम्ररी खानु बाहेक व्यञ्जनहरू बनाउने समय पनि भयो।
अब मैले यो पृष्ठ पत्ता लगाएको छु र मेशिनको साथ प्रयोग सुरू गर्न लागिरहेको छु।
सुरु गर्न म तपाईंलाई एक प्रश्न सोध्नु पर्छ। केही रेसिपीहरूमा मासु, माछा, तरकारी ब्रोथ ट्याब्लेटहरू थपिन्छन् ... म सामान्यतया तरल ब्रोथ प्रयोग गर्दछु (ती इँटहरू मध्ये एक हो कि उनीहरूले तयार पारेको बेच्दछन्), ट्याब्लेट कत्तिको बराबर हुन सक्छ?
कार्मेन रभिलालाई जवाफ दिनुहोस्
कार्मेन, मलाई थाहा छैन कति ब्रोथ बराबरको बराबर हुन्छ। ट्याब्लेटहरू नुनको सट्टा थपिन्छ हाम्रो खाना समृद्ध गर्न।
मैले हिजो रात यो नुस्खा बनाएको छु, गोली पनी मांस ब्रोथ थियो किनकि यसमा कुनै तरकारी थिएन।
यो स्वादिष्ट थियो !!! धेरै धन्यवाद!
मोन्टसेकिटलाई जवाफ दिनुहोस्
केवल स्वादिष्ट !!!!! मैले ताजा मशरूमहरूको लागि मशरूमहरू बदलें र बाँकी नुस्खा पनि त्यस्तै थियो। मसँग घरमा मान्छेहरू थिए जो अति क्रीमयुक्त थिएनन् र तिनीहरूले भाँडा माझ्ने चीजहरू छोडिदिए कि उनीहरूलाई नुहाईदिन पर्थ्यो! म यो नुस्खा धेरै बनाउन जाँदैछु !!!!
मारिपाजलाई जवाफ दिनुहोस्
प्वालहरूको प्वाल भन्यो
नमस्ते, म अहिले यो नुस्खा बनाउँदैछु र मलाई लाग्छ कि मैले यो रेसिपी धेरै समय अघि प्रतिलिपि गरेको थिएँ र सामग्रीहरू लीक थिए, तर मैले नुहाइ पढिरहेको बेला मैले चुहावट कहिले जोड्ने भनेर भनेको थिइनँ, मैले राखेको छैन। यो र मलाई थाहा छैन कि यो कसरी बाहिर जान्छ ... मलाई आशा छ यो पनि राम्रो छ, यस्तै एक पटक, केहि थोरै दूधको साथ क्रीम थपे पछि मशरूमको स्वाद कम गर्न सजिलो हुन्छ? हामी यसको स्वाद कसरी देख्छौं: -)
प्वालको स्तम्भलाई जवाफ दिनुहोस्
पिलर, लीकहरू पहिलो चरणमा प्याज, लसुन र मशरूमको साथ जोडिन्छन्।
मैले भर्खरै लीकहरू बिना नै बनाउने विधि समाप्त गरें र यो पनि फिंगर-लुकका लागि, मलाई धेरै धन्यवाद, रेसिपीको लागि धन्यवाद, अर्को पटक म लीकहरू प्रयास गर्नेछु।
ब्रावो पिलर !! ... म ती मानिसहरूलाई मन पराउँछु जो व्यंजनहरू आफ्नै बनावटी बनाउँछन् !!
कति व्यक्ति छन् को लागि सामग्री? म यसलाई आज रातीको खानाको लागि बनाउँदैछु, म तपाईंलाई यसको बारेमा बताउनेछु 🙂
जुडिथलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार जुडिथ, यो चार व्यक्तिको लागि हो, लगभग।
सत्य यो हो कि म तपाईको ब्लगलाई लामो समयदेखि हेरिरहेको छु, तर मैले कहिले पनि कुनै नुस्खा बनाउन शुरू गरेको थिइनँ, यस हप्ताको अन्त सम्म जब म मशरूम क्रीम बनाउँदछु र मेरो श्रीमान् भन्छु यो एकदम राम्रो छ, हामीलाई दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद विचार स्वादिष्ट व्यंजन र छिटो बनाउन।
जीसस इग्नासियो विलाबा भन्यो
धेरै धनी धन्यबाद
जेसस इग्नासियो भिल्लाबालाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद येशूलाई! हामी तपाईंलाई धेरै मन पर्यो कि धेरै खुसी छौं। अंगालो।
स्वादिष्ट! मैले करीव or वा m मशरूमहरू पनि आरक्षित गरें, तिनीहरूलाई सानो टुक्रामा काटें, प्यान्सनमा नहाले सम्म ताने र बेलसमिक सिरकाको एक सानो क्रीम नथपे सम्म प्यासनमा साटाईदें। अन्तमा मैले यसलाई क्रीममा थपियो ... मम्म्म्म्म्म् ... अविश्वसनीय !!
Albus लाई जवाफ दिनुहोस्
महान! तपाईको सन्देश को लागी धेरै धन्यबाद। 🙂
यदि यो जमेको च्याउले बनेको छ भने, तिनीहरूले धेरै पानी छोड्छन् र प्याज र लीकहरू कम त्राइन्छन्। मलाई लाग्छ कि यो पहिला प्याज र लीक केही मिनेट को लागी साफ्ट गर्नु राम्रो हुन्छ र त्यसपछि मशरूम जोड्नुहोस्, पानी खन्याएर र सम्पूर्ण प्रक्रिया जारी राख्नु अघि केही मिनेट पछि सबै थोरैमा राख्नुहोस्।
लस मुक्त चिकन र तोरी lasagna
आलु, गाजर र हरियो सेम सूप